Soomaaliya oo 35 sano kadib QM u gudbisay warbixin ku saabsan Heshiiska caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda Carruurta – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Soomaaliya oo 35 sano kadib QM u gudbisay warbixin ku saabsan Heshiiska caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda Carruurta
Wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda Aadanaha ee Soomaaliya ayaa 35 sano kadib qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan Heshiiska caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda Carruurta.
Warbixintan oo horudhac ah ayaa waxay ku saabsantahay xogo laga soo uruuriyey jilayaaasha Dowliga ah iyo kuwa aan dowliga aheyn ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya, gobolka banaadir,ururada bulshada rayidka, iyo sidoo kale qaar kamid ah carruurta Soomaaliyeed,iyadoo ujeedaduna ay aheyd sida ugu wanaagsan ee loo ilaalin karo xuquuqda Carruurta.
Sanadii 1984tii oo haatan laga joogo muddo 35 sano ah ayey aheyd markii ugu dambeysay ee Soomaaliya ay gudbiso warbixinta 5ta sano ah taasoo ay u geysay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay,iyadoo umarineysa xog-hayaha guud ee qaramada miboobay.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Deeqa Yaasiin Xaaji Aadan oo maanta shir jaraa’id ku qabatay xafiiskeeda ayaa sheegtay in si rasmi ah ay golaha Qaramada midoobay ay ugu gudbiyeen warbixin kusaabsan Axdiga caalamiga ah ee dhowrista Xuquuqda Carruurta, taasoo ay muddo diyaarinayeen.
"waxaa sharaf wayn ii ah inaan idinku wargaliyo in wasaarada haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ay gudbisay, Warbixintii billowga aheyd ee axdiga qaramada midoomay ee xuquuqda Carruurta, axdigaan waxaa la saxiixay sanadkii 2015kii wuxuuna ahmiyad gaar ah siinayaa daryeelka carruurta, iyo xuquuqdooda, marka axdigaas qodobkiisa 44 aad wuxuu ku waajibiyey dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoomay in ay soo gudbiyaan warbixintooda billowga ah, kadibna shantii sano kadiba ay soo gudbiyaan warbixin, warbixintaas waxay ka turjumeysaa waxyaabihii ay dowlad kasta ka qabatay axdigaas, waxaana aad muhiim u ah in Soomaaliya markii ugu dambeysay axdiyada ay saxiixday oo ay warbixinna ka bixisay ay aheyd sanadkii 1984tii, Marka waxaa aad farxad wayn noogu ah in 35 sano kadib aan maanta warbixintaan la wadaageyno golaha qaramada midoobay, gaar ahaan guddiga u qaabilsan xuquuqda carruurta, anagoo umareyna safaaradeenna Geneva" ayey tiri Deeqa Yaasiin Xaaji Aadan oo ah Wasiirka Wasaarada Haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiir Deeqa ayaa mar ay ka hadleysay caqabadaha ay kala kulmeen intii ay uruurinayeen xogaha ku saabsan diyaarinta warbixinta ay tahay helida xogo rasmi ah oo Soomaaliya quseeya arintaasina ay mararka qaar saameyn kuyeelaneysay ,iyadoo umahadcelisay ururada Bulshada rayidka ah iyo qaar kamid ah wasaaradaha Dowladda oo gacan wayn ka siisay in sida rasmiga aheyd loo helo xogaha kusaabsan diyaarinta warbixinta.
Sii deynta warbixinta Billowga ah ee heshiiska caalamiga ee xuquuqda Carruurta waxay muujineysaa sida ay Dowladda Federaalka Soomaaliya ay uga go'antahay inay si buuxda ay uga qeybqaadato kor uqaadista iyo ilaalinta xuquuqda Aadanaha ee Soomaaliya.